Supermap - Xalka mideeynta adag GIS 2D iyo 3D - Geofumadas
Bixinta - xalka adag GIS 2D iyo 3D
Abriil, 2019 Geospatial - GIS, aragti ugu horeysay
Bixinta GIS waa adeeg bixiye GIS, oo wakhti dheer ku jira suuqa oo taariikhda laga bilaabo bilawga bilawga ah xalal ballaadhan oo ku saabsan xaaladaha geospatial. Waxaa la aasaasay sanadkii 1997 ah, koox khubaro ah oo cilmi oo taageero ah Academy of Sciences ee Shiinaha, salkeeda hawl waxa uu ku yaalaa ee Beijing China, oo kuu sheegi karaa in kobaca ayaa horusocod ah ee Asia, laakiin maaddaama 2015 uu leeyahay heer xiiso leh oo balaarin ah iyada oo la cusbooneysiiyay fikraddiisa ku jirta tiknoolajiyadda kala duwan ee GIS, GIS ee daruurta, jiilka xiga ee GIS 3D, iyo macmiilka GIS.
In ay waab toddobaadkii berdaha Hanoi, waxaan lahaa waqti ay ku hadlaan waxyaalo badan oo ka dhigaysa this software, oo aan la garaneyn in badan oo macnaha guud ee Western. Ka dib markii dhowr isdhexgalka, waxaan go'aansaday inaan qoro maqaal ku saabsan waxa ii dhuftay inta badan GIS SuperMap.
SuperMap GIS, wuxuu ka kooban yahay teknoolojiyada muhiimka ah -dhufto ee- oo ay ku jiraan qalabka processing iyo maamulka xogta geospatial. Tan iyo 2017, dadka isticmaala ayaa ku riyaaqayaa update ay, SuperMap GIS 8C, si kastaba ha ahaatee, 2019 this la bilaabay in SuperMap ku 9D dadweynaha, kaas oo ka kooban afar nidaam technology, GIS Cloud, multiplatform GIS dhafan GIS 3D iyo bigdata GIS.
Si aad si fiican u fahamto sababta loo tixgelinayo xal macquul ah, waa inaad ogaatid sida alaabtaadu ka kooban tahay, taas oo ah, mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Multiplatform GIS waxaa ka mid ah: iDesktop, Qeybta GIS, iyo GIS Mobile. Marka ugu horeysa ee iDesktop ee kor ku xusan, waxaa lagu hormariyaa iyadoo lagu saleynayo furayaasha -dhammaystirnaanta- jaanqaadi processor kala duwan, sida ARM, IBM Power ama x86, oo ka shaqeeya si hufan jawi kasta oo hawlgalka ah in la geliyo waa Windows, Linux, iyo isku muuqaalada 2D iyo 3D.
Nooc kasta oo ah adeegsade, shakhsi, ganacsi ama dawlad ayaa isticmaali kara codsigaan mashiinka, sababtoo ah waa mid aad u fudud in la isticmaalo waxaana loo qaabeeyey qaabka codsiyada Microsoft Office. Codsigan, waxaad ka heli doontaa dhammaan qalabyada laga yaabo in lagu arko mashiinka GIS-da si loogu rakibo oo loo muujiyo xogta, dhisidda hay'adaha, ama hababka falanqaynta, kuwaas oo helitaanka adeegga khariidada webka lagu daro, kor u qaadida iskaashiga dadka isticmaala. Waxaa ka mid ah sifooyinka hawlgalka waxaa ka mid ah: Maareynta iyo muuqaalka sawirrada sawirrada sawirrada, BIM, iyo darajooyinka dhibcaha.
Xaaladda GISMobile, waxaad ku shaqeyn kartaa goobaha IOS ama Android, waxaana loo isticmaali karaa xogta 2D iyo 3D labadaba. Codsiyada Supermap Mobile Supports (SuperMap Flex Mobile iyo Supermap iMobile), oo ay ku jiraan sahaminta mawduucyada, beeraha saxda ah, gaadiidka caqliga ah ama kormeerka goobaha, qaar ka mid ah kuwaan ayaa lagu habeyn karaa userka.
GIS ee daruurta
Mid ka mid ah istiraatiijiyada lama huraanka ah ee aan la loodin karin ee maamulka maaraynta xogta juqraafiyeed. Waa mareeg ku xiran terminaal badan oo GIS ah si qofka isticmaala / macaamiishu u dhisi karo alaabta si habboon oo deggan. Waxay ka kooban tahay SuperMap iServer, SuperMap iManager iyo SuperMap iPortal, kuwaas oo faahfaahsan hoosta.
iServer SuperMap: taas oo ah heer sare oo waxqabadka sare leh, oo aad qaban kartid dhaqdhaqaaqyo sida maamulka iyo kooxaynta adeegyada 2D iyo 3D, iyo sidoo kale bixinta khayraadka si loo kobciyo ballaarinta. IBS SuperMap, waxaad ka heli kartaa adeega liiska xogta, muuqaalka xogta dhabta ah ama dhismaha Codsiyada Weyn.
SuperMap iPortal: shabakad isku-dhafan oo loogu talagalay maamulka khayraadka GIS ee la wadaago - raadinta iyo gudbinta-, diiwaangelinta adeega, xakamaynta kumbuyuutarka oo badan, tiknoolijiyada lagu daro sameynta khariidadaha webka.
Taageerada iExpress: Waxaa loo dhisay si loo hagaajiyo waaya-aragnimada adeegsiga isticmaalka terminalka, iyada oo loo marayo adeegyada wakiilada iyo qalabka tiknoolajiyadda dardargelinta. Iyadoo iExpress ay suurtogal tahay in la dhiso nidaamka codsiyada ee nidaamka codsiyada ee webiga ah oo badan, qiimo jaban. Waxaa intaa dheer, waxay u oggolaaneysaa daabacaadda degdega ah ee alaabta, sida 2D iyo 3D maasas.
SuperMap iManager: loo isticmaalo maareynta iyo dayactirka adeegyada, codsiyada iyo tiro badan oo xog ah. Waxay taageertaa xalka Docker - tiknoolajiyada weelka - si loo gaaro dejinta hufnaanta ee GIS ee daruurtu, iyo abuurista macluumaad weyn, tani waxay u saamaxaysaa waxqabadka sare iyo isticmaalka hooseeya ee ilaha. Waxay ku habboon tahay barxado badan oo daruur ah, waxayna soo saartaa tusmooyinka korjoogteynta.
SuperMap iDataInsight: waxay u ogolaataa helitaanka macluumaadka geospatial, laga bilaabo kombiyuutarka - maxaliga - iyo shabakadda, wuxuu hubiyaa in user uu heli karo muuqaal firfircoon ee xogta, soo saaridda kaddib. Waxay leedahay taakuleynta xogta xogta faafaahin, adeegga webka ee dariiqa, sawiro qani ah.
SuperMap Online: wax soo saarka waxan sameeyo wax aad ka heli haboon badan, kiraysato iyo marti xogta GIS online. SuperMap Online waxay bixisaa users la GIS a marti daruurta si aad u dhisi kartaa GIS dadweynaha, taas oo qaadi karta, dhisaan iyo wadaagaan server xogta da'ayeen. SuperMap Online, eg waxa ay bixisaa ArcGIS Online, waxaa jira muuqaalada wada sida: falanqaynta (Buffers, interpolations, soo saarista warbixin, duwo diinta ama wadada xisaabinta iyo navigation), loading xogta 3D, daabacaadda iyo siyaabaha ay u wadaagaan online kala duwan SDK xogta macaamiisha, helitaanka xogta mowduuc.
Products SuperMap ayaa dhafan 2D maamulka iyo xogta 3D la sifooyinka iyo qalab suurtagal ah: BIM iyo saxba, uugu maamulka xogta photogrammetric, xogta Qaabaynta ka scanners laser (daruur dhibcood), iyadoo la isticmaalayo xubno dulinka ama 2D raster in ay ku dari dhererka iyo texture xogta si ay u abuuraan walxaha 3D.
SuperMap, ayaa dadaallada lagu jaangooyo xogta 3D ah, tani waa suurto gal in ay midoobeen oo intaa ku daray teknoolajiyada sida xaqiiqada dalwaddii (VR), WebGL, xaqiiqada qabsiyo (AR), iyo 3D daabacaadda. Taageerada xogta dulinka (dhibic, geesoolayaasha, line) iyo muuqaalada text (qoritaan gaaban CAD), Revit iyo Bentley si toos ah u akhri xogta, lagu daydo u qaadis digital, iyo xogta Grid; kaas oo aad ka dhalin karto xogta dhismaha ee meshes loo qoondeeyey, hawlgalo leh mareegaha voxel, taageerooyinka xisaabinta xisaabinta ama ku darsiga saamaynta ku saabsan sheyga.
Qaar ka mid ah codsiyada deegaanka 3D SuperMap waxay yihiin:
Isticmaalka qorshooyinka qorshaynta: wuxuu dhisaa qorshe qorsheyn ah iyada oo loo marayo fulinta qalab firfircoon ee dhererka iyo iftiinka dabiiciga ah ee walxaha goobaha dhabta ah.
Naqshadeynta Qorsheynta Muuqaalka: Sida ku xusan aagga iyo astaamaha qaabka 3D, nidaamku wuxuu abuuraa waxyaabaha sida wadooyinka.
La tashiga 3D: waxaa suurtogal ah in la kormeero ilaha dabiiciga ah iyo hantida maguurtada ah, si loo go'aamiyo goobtooda iyo abuurista qorshe badbaado.
Iyada oo farsamooyinka SuperMap, geedi socodka lagu samayn karaa bandhigay, kaydinta, processing xogta, falanqaynta da'ayeen iyo gudbinta xogta ee waqtiga dhabta ah, taas isagoo hal-abuurka ah ee SuperMap SIG + Big Data.Proporciona ku iObjects for Spark qaybta horumarinta ee GIS-ga, taas oo bixisa adeegsadaha leh awoodda GIS ee loo baahan yahay si loo xakameeyo xogta weyn. Dhinaca kale, waxaa laga yaabaa in ku xusan, kaas oo bixiya technology waxqabadka sare firfircoon iyada oo taageero badalitaan Hababka map, updates iyo wax matalaya matalaad waqtiga dhabta ah, sidoo kale maktabadaha il furan iyo farsamooyinka soo bandhigay dalab weyn xogta aan ollogga (jaangooyooyin kala firdhaan, sholaatooyinka, khariidadaha tikidhada, ama khariidadaha taraamka.
The sifooyinka kor ku xusan waxaa loo isticmaalaa si loo horumariyo fahamka deegaanka, taas oo keenta in horumarinta iyo go'aan-qaadasho ku saabsan mawduucyo ay ka mid yihiin: Smart City, adeegyada bulshada, maamulka magaalooyinka iyo khayraadka dabiiciga ah. - Beijing, jir meel juquraafi magaalada digital nidaamka daruur ku salaysan Urban Maamulka Degmada Chogwen: daraasado, halkaas oo ay isticmaalaa si loo isticmaali SuperMap iyo teknoolajiyada gudahood kuwa Xusuuso ìueden visualized , masiibo Japan System macluumaad tareenka Geoportal for rakiban oo baaxad weyn oo ku salaysan SuperMap Japan iyo Platform saadaaliyo abaarta.
Haddii aan mid ka mid ah kor ku magacaaban, qaado tusaale ahaan: nidaamka Information for rakiban tareenka oo baaxad weyn ee Japan ku salaysan SuperMap, aad leedahay si aad u sheeg in SuperMap GIS, waxay maamushaa oo dhan xarumaha tareennada ee Japan, sidaa darteed mugga xogta waa aad u ballaaran iyo culus, marka lagu daro baahida loo qabo mareegta soo buuxisa shuruudaha tayada iyo isku xirnaanta.
SuperMap fuliyo adeegyada Internet iyo adeega Intranet, oo lagu daray xog model maamulka la Waxyaabaha SuperMap, oo wada tashi warbixin da'ayeen, update tirakoobka, update aan ollogga (meelaynta calaamad iyo hay'adaha), nuqulo ka mid ah khariidadaha la sameeyey a, falanqayn duubabka, naqshadeynta iyo daabacaadda; Waxaas oo dhan iyada oo loo marayo macluumaad bandhigay gaar ah - dhisay SuperMap- oo kaliya xogta ee ay shirkadda this, kaas oo la filayo group Jr Bariga Japan oo maamula nidaamka tareenka ayaa la kulmay.
Waxa xiiso leh oo ku saabsan arrintan xal, fududaato in la isticmaalo, line a soo saarka buuxa oo kala duwan, keenidda waxyaabaha ay, qaab deggan xilalka iyo awoodaha dastuurku si fiican u noqon karta hab wanaagsan shirkadaha diiradda saaray natiijada loo isticmaalo. badeecada bixiyeen aan loogu tala galay oo keliya, waayo, geographers ama geomatics, laakiin sidoo kale ayaa keenay in ay dawladda iyo ganacsiga jidhkooda, kuwaas oo, iyadoo la isticmaalayo oo dhan, ka dhigo mid loogu talo galay karaa in go'aanada dhabta da'ayeen.
Post Previous«Previous Waqtiyada Timeshiga - Ku rakib si aad u hesho sawirada taariikhda dayax-gacmeedka leh AutoCAD
Post Next Codsiga muraayada laser-ga ee 3D wuxuu ku guuleystaa abaalmarinta IFESNext »